किन तात्यो सामाजिक सञ्जाल ? के भएको थियो मिस नेपाल अडिसनमा? | ArtistSansar.com
मिस नेपाल २०१९ का लागि लिइएको अडिसनको भिडियो शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । त्यसमा एक प्रतियोगीले मेकअप नगरेको र चस्मा लगाएको भन्दै निर्णायकले प्रश्न गरेकी छन् । त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्चा परिचर्चा भएको छ ।
कृष्ण आलेले चाहिँ निर्णायकको बोली रुखो भएको आशयमा आफ्ना विचार राखेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘निर्णायकले आफू मात्रै यो संसारको राम्री र स्मार्ट हुँ भने जसरी बोलेको देखिन्छ । प्रतियोगी युवतीलाई प्रेरणा दिनुको सट्टा उपेक्षा गरेको देखिन्छ । मेकअपबिनाको सौन्दर्यमा दिव्यज्योति हुन्छ भन्ने तिनलाई थाहा रहेनछ ।’ भिडियोमा देखिएकी युवती ललितपुरकी अस्मिता महर्जन हुन् । उनले बिहीबार मात्रै आफू मिस नेपालमा छानिएको र त्यसतर्फको यात्रा प्रारम्भ भएकोमा खुसी जनाउँदै फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरेकी छन् । ‘प्रतियोगी नम्बर ८,’ उनले ह्यास्ट्यागमा लेखेकी छन्, ‘ह्याप्पी डेज ।’ त्यसको आठ घण्टापछि उनको अडिसन लिइएको भिडियो फुटेज भाइरल भयो । अस्मिताले भाइरल भिडियोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् । मिस नेपाल शृंखला खतिवडाले ‘नो मेकअप एन्ड स्टिल ब्युटिफुल’ भन्दै आफ्नो फोटो ट्वीट गरेकी छन् ।
पूर्वमिस नेपाल निकिता चाण्डकले यो के भइरहेछ भन्नेबारे आफूले नबुझेको बताइन् । ‘म पनि मेकअप बेगर नै अडिसन दिन गएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘ड्रेसअपको तरिका र प्रस्तुति शैलीबारे आइडिया थिएन । मलाई यसबारे प्रश्न सोधिएन ।’ कतिलाई मेकअपमा रुचि नहुने र सबैले सौन्दर्य प्रतियोगिता नपछ्याउने भएकाले बाहिरी आवरणलाई मुद्दा बनाउनु ठीक नभएको उनको भनाइ थियो ।